Kwenzeka Ntoni kwiiDiving eziPhakamileyo zaseNew York? - Izindlu Ezithengiswayo
Eyona Izindlu Ezithengiswayo Kuninzi kakhulu ekwenzeni iSplash: Nantoni na eyenzekileyo kwiDiving High?
Kuninzi kakhulu ekwenzeni iSplash: Nantoni na eyenzekileyo kwiDiving High?
I-Astoria High Dive. (UWally Gobetz / flickr)
NjengoAgasti moseys ukuya esiphelweni sayo kwaye abantu baya besanda ukuthetha ngehlobo kwixesha elidlulileyo, ingqondo yomntu ngokwendalo ihambela kwezinye ihlobo zeminyaka edlulileyo. Kuninzi lwethu, ezi zaphawulwa, kunye nokutshiswa lilanga kunye neenkampu zasehlotyeni, yimisebenzi yasemanzini yesibindi: ukutsiba kwamawa, ukujikeleza ngentambo kunye neebhodi zokuntywila.
Ukutsiba kweCliff kunye nentambo ngoku, ewe, konke kuphelile, kodwa iibhodi zokuntywila, njengezona zilawulwa kakhulu kwezi ndawo zintathu kwaye ekuphela kwazo ezonganyelwe ngabagcini babasindisi, ziye zahlala ixesha elide kunentanga yazo. Nangona nabo, sele bekhutshiwe ngokucwangcisiweyo okanye behlelisiwe kwiminyaka edlulileyo- kumachibi angama-67 eNew York, bathathu kuphela abaneebhodi zokuntywila, INew York Times kutshanje ingxelo : IZiko loLonwabo likaTony Dapolito eWest Village, uJohn Jay Park eYorkville naseFort Totten Park eBayside, eQueens. Kwaye kuzo zonke, zonke zinobunzima, imitha enye eyahlukileyo. Ikho imitha emithathu yeeplatform zokuntywila ezikhuthaza uloyiko kunye noloyiko kubantwana abancinci kwaye banikezela amalungelo okuqhayisa kubantu abadala, ngakumbi abo babenobuganga bokuntywila okanye baphose phezulu.
Ewe kunjalo, ukukhangela kuGoogle kokuntywila okuphezulu eNew York kuvela, kwiintsimbi zokuqala ezine, ibar yokuntywila ePark Slope, elandelwa yiklabhu yokuntywila esekwe kwikholeji yokuThenga. Ukuntywila okuphezulu e-Astoria, ngeli xesha-iqonga elibambekayo, lexesha likaMoses elibonisa umdlalo omkhulu ngakumbi echibini lesixeko esikhulu - sikulungele ukuba yindawo yemidlalo yeqonga. Akusekho ndawo esixekweni apho i-amateur inokukhulisa isibindi sayo sokuthakazelisa.
Le ayisiyonto intsha, qiniseka. Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, xa isebe leepaki laqala ukuxoxa malunga nokuba kwakuza kubakho ntoni ngokuntywila okuphezulu e-Astoria, apho izilingo ze-Olimpiki zase-US zabanjwa ngo-1936, 1952 nango-1964, kwaye ezibandakanya iqonga lokuntywila iinyawo ezingama-32 ngaphezulu kwamanzi, kwakungekho ngxoxo yokubuyisela iqonga oza kulisebenzisa. Kwaye emva kweminyaka yokungahoywa, i-amphitheatre ibonakala ilungelelwaniso olufanelekileyo lwendawo emangazayo-kunzima ukuthelekelela iqela labathandi bendawo yokubhukuda abenza iqela lokuntywila elibizwa ngokuba yiAqua-zanies namhlanje, njengoko benza ngeminyaka yoo-1940 . (Njengoko IBowery Boogie Kuxelwe, iqela laba ngabaqhubi bamanzi baseMelika abakhokelayo kwaye baya nakutyelelo lwamanye amazwe kwii-1950s.) U-Greg Louganis olandelayo uza kuqala phi? (Mnu.Louganis kwiOfisi yoMqwalaseli kwinyanga ephelileyo.)
Kwaye ke, xa iqonga le-Astoria laqala ukuvalwa ngeminyaka yoo-1970, emva kokuwela kwimeko entle, iibhodi zokuntywila zazisele zinyamalala kumadama okudada kwilizwe liphela ngenxa yamatyala, okanye ukoyika amatyala. OoMasipala, besoyika uxanduva, baya begqiba ekubeni basuse iibhodi zokuntywila-zombini eziphakamileyo kunye nezisezantsi-ngaphandle kokuthandwa kwabo. Njengoko igqwetha elinye laxelela i Ixesha ngowama-2003 xa uArmonk esusa ibhodi yokuntywila, nangona ‘izinto ezinzulu ezipokothweni’ zazithetha ukuba kukho amatyala ngenxa yeengozi zebhodi ephezulu, wathi bambalwa abaphumeleleyo. Uloyiko lwezomthetho, nangona kunjalo.
Kule mihla, ziye zanyamalala ubukhulu becala nakumachibi asemva kwendlu, njengoko imigaqo-nkqubo yeinshurensi kunye neekhontrakthi zingavumi ukuwafaka. Ewe kunqabile kakhulu ukuba iibhodi zokuntywila zifakwe naphina ngaphandle kweyunivesithi okanye useto lwesikolo. Iidiving eziphakamileyo, ngokuqinisekileyo, zifumaneka kwiindawo ezinjalo — izixhobo ezigcinelwe iimbaleki eziqeqeshiweyo, endaweni yesiko lobuntwana.
Nangona iibhodi zokuntywila zisahleli, ngendlela yazo ethozamileyo, edume kakhulu kumachibi ambalwa asekhona: ibhodi yokuntywila yaseDapolito ihlala izobe umgca wabantwana kunye nabantu abadala, ngokwe Ixesha , nokuba ngaba, malunga neenyawo ezine ngaphezulu kwamanzi, i-dering-do ubukhulu becala inomda kwabo bazama ukubuyela umva.
Kubo bonke abanye abantu, kuhlala kukho iintlobo ezingathandekiyo ezinqabileyo zasemanzini: ukubona ukuba ungabamba ixesha elingakanani uphefumla phantsi kwamanzi.
I-Intanethi iphulukana nengqondo yayo ngaphezulu kwe- # Force4Ham
Kutheni uChristian Bale njengoDick Cheney kwi-'Vice 'yakhe engaphantse yenzeke
Ku 'Ukutsha,' uBradley Cooper Ubonakalisa ukuba Kukho iNdlela eNye yokuSebenzisa iJuba
I-Fallon ngokuchasene neColbert Fight yokuLwa ebusuku ku malunga nokuCinga kwakho
ungam microchip umntwana
Iifilitha zamanzi zokujonga kwakhona ekhaya
Umpheki wasekhaya vs ifaskoti eluhlaza okwesibhakabhaka etyatyekwe
Iimuvi ezifana nomdlalo bhanyabhanya we-lego
Esona sihlalo sihle seofisi somqolo nentlungu